Momba anay - My Solar Technology Co., Ltd.
Tontonana atsasaky ny sela
My Solar Technology Co., Ltd. natsangana tamin'ny Desambra 2010, dia mpikambana ao amin'ny vondrona MY Solar, izay manampahaizana manokana amin'ny desian, ny fanamboarana ary ny fivarotana ny modules PV sy ny vokatra mifandraika
Ny ekipa mpitantana anay dia efa za-draharaha sy matihanina. Ny vokatra fototra - Module PV, dia namboarina tsara, tena tsara amin'ny asa aman-draharaha, ary manana fahombiazana azo antoka, ny elanelan'ny herinaratra dia manarona 3Wp-400Wp, dia be mpampiasa amin'ny tobim-pamokarana herinaratra photovoltaic, BIPV & BAPV, fifandraisana satelita, fanaraha-maso ny jeolojika ary fisorohana ny doro ala, sns. Ny vokatray dia aondrana any Eropa, Amerika, Azia-Pasifika ary Afrika.
MY Solar dia mpamatsy fototra tetik'asa lehibe lehibe maro any Shina, ary mpamatsy modules photovoitaic sy vokatra azo ampifandraisina izay voafantina, atokisana ary atolotry ny andrim-panjakana manao famolavolana matihanina maro.
Inona no lazain'ny mpanjifa?
"Mike, manana sakafo vaovao aho momba ny SOLAR MY. Ankehitriny manana ekipa tsara kokoa ianao. Jessie sy Johnson dia tena matihanina ary mahay. Fantatr'izy ireo ara-potoana ny fangatahana sy ny valiny. Miarahaba anao! Mazava ho azy fa tena matihanina ihany koa ianao ary fantaro tsara ny vokatrao sy ny varotrao. "- semih
“Tena afa-po amin'ny Solar aho, ny fomba iatrehan'izy ireo olana dia mahatonga ahy hahatsapa ho mahafinaritra, fahafinaretana ny miara-miasa amin'izy ireo '-Ali
Isaky ny fandefasana azy tsirairay avy, ny Solar-ko dia mandinika ny antsipiriany rehetra, mamonjy olana be dia be ary maneho ny fankasitrahako ny maha matihanina azy ireo - John
No18, Yanxing Road Yanqiao Huishan Distrikan'ny fampandrosoana ara-toekarena wuxi, Sina